Iyunithi 1A Secure 2 bdr 1 Igumbi lokugezela le-2nd floor apt - I-Airbnb
Iyunithi 1A Secure 2 bdr 1 Igumbi lokugezela le-2nd floor apt
* * Siyazi ukuthi uxhumano luyisihluthulelo... sinikeza ukufinyelela KWE-WIFI okusheshayo ezivakashini.* * Ifulethi elinamakamelo okulala amabili elivalelwe ngokwakho elinekhishi elinakho konke, indawo yokuphumula/igumbi lokudlela kanye nobhavu owodwa. Ngokwezempilo yakho, sinendawo yokuzivocavoca nendawo yokubhukuda yokuzivocavoca futhi sinikeza umshini wokukhipha amanzi okuphuza. Ukuze uhlale ngokunethezeka, sinejenereyitha ezimele, umthombo osendaweni, namathangi amanzi. Ukuze uphephe, sinokuvikeleka kuka-24/7 kanye nocingo lukagesi. Sinabo abaphathi basendaweni kanye nabasebenzi abazinikezele ukukhonza.
Amabhulokhi angu-2 ukusuka ezimpambanweni zomgwaqo ezinkulu ezikuxhumanisa ne-Kumasi Mall ohlangothini olulodwa, kanye nedolobha laseKumasi kwelinye. Ukuhamba ibanga ukuya eMelcom. Unobumfihlo bakho efulethini, futhi ungajabulela ichibi elisetshenziswayo elivamile, indawo yokuzivocavoca kanye nengadi.
Siseduze nesikole, ngakho kuba namandla emoyeni phakathi nezinsuku zesikole. Siseduze nezindawo eziningi zokuthenga nezokuzijabulisa okwenza kube lula futhi kube lula ukufinyelela kuzo. Ngaphakathi kwezindonga sinezisebenzi ezinobungane neziwusizo lapho ukuze zisize nganoma yini. Lokho kuhlanganisa ithimba lethu lezokuphepha, ithimba lethu lokuhlanza nabaphathi bethu abazinikele. Sibheke ngabomvu ukukwamukela!
Sinabaphathi ababili abasebenza ngokugcwele. Omunye uhlala esizeni, omunye ungena zonke izinsuku. Ngaphezu kokuxhumana nabo ungahlala ufinyelela ngohlelo.